समाचार Archives - Page4of 186 - Samachar Post Dainik
नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा देखियाे चमक (भिडियो सहित)
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार १३:१०
नर्भिक अस्पतालमा उपचार सुरु भएपछि मोडल निशा घिमिरेको अनुहारमा चमक देखिएको छ । जीवन म’रणको दो’साधमा रहेकी उनको अस्पतालको बेडबाट ताजा तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । जस्मा उनी म’न्द मु’स्कुराईरहेको महसुस गर्न सकिन्छ । उनको यस्तो अवस्थाबारे थाहा पाएपछि नर्भिक अस्पतालकि प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले नि:शुल्क.....
आखिर किन मृ,त महिला’सँग बिवाह गरियो ? यस्तो छ कारण।।
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०५:१४
विवाहको सन्दर्भमा विश्वमा फरक फरक चलन र परम्परा छ । त्यसमध्येको सबैभन्दा अनौठो विवाहको परम्परा चीनमा छ । चीनको एउटा गाउँमा युवाहरुले मृत युवती’सँग विवाह गर्ने गर्दछन् । चीनको एक गाउँमा विगत ३ हजार वर्षदेखि विवाहको यस्तो परम्परा चल्दै आएको छ । जहाँ अविवाहित र मृ,त युवकको विवाह मृत महिला’सँग गरिदिने चलन.....
मुटु मा प्वाल, दुबै खुट्टा छैनन् ,ढाडमा यो के भयो यस्तो ,कठै बिचरा ,चल्यो रु वा बासि (हेर्नुस् भिडियो )
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०५:०२
भनिन्छ जिन्दगि सुख र दुखको एउटा पाटो हो तर जिन्दगीमा सुख खोज्दा खोज्दै दुखले नै पिरोलि रह्यो भने जिन्दगी यशै पनि बेकार भएजस्तो लाग्छ । जिवनबाट आजित भएजस्तो लाग्छ ।संघर्ष जिवनको पाटो हो अनि संघर्षबाटै खुसि पाउन केके गर्छौ तर अन्ततः दुख नै हात परिरहदा जिन्दगीबाट हार खाए जस्तो लाग्दो रहेछ । त्यस्नै नै भएको.....
खुसीको खबर : अब नि’षेधाज्ञा खुल्ने भयो , कहिले देखी ? सबैले हेर्नुहोला ।
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०४:४६
काठमाण्डौँ : नेपालमा पछिल्ला केही दिनमा कोरोनाभाइरसको सं’क्रमण घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो साताको तथ्यांक हेर्दा नयाँ सं’क्रमित थपिने क्रम निरन्तर घटेको देखिन्छ। हिजो (शनिबार) १४ हजार ७ सय ५२ जनाको परीक्षण गर्दा ४ हजार ४८७ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भयो। अर्थात ३०.४१ प्रतिशतमा.....
निषेधाज्ञाको बेला पहिलो” पटक यति धेरैले ह्वात्तै बढ्याे सुनको भाउ , तोलाको कति पुग्यो ?
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०४:३९
आज शुक्रबार ह्वात्तै बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य ह्वात्तै बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ६ सय रुपैयाँ बढेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज छापावाला सुन ताेलामा ६ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला.....
खन्दै गरेको खेतमा भिटियो हिराको खानी ! भाग्य चम्किएपछि मजदुरबाट बने करोडपति
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०१:३२
काठमाडौं । मान्छेहरुको भाग्य चम्किनलाई धेरै समय लाग्दैन् । यो पृथ्वीमा यस्ता केही धातुहरुरु पाउँछन्, जुन पाउँदा मान्छे रातारात करोडपति, अर्बपति बन्न सक्छन् । भारत, मध्य प्रदेशको पन्ना जिल्ला हीराको शहर भनेर चिनिन्छ । भनिन्छ कि त्यहाँको माटोले कसैलाई पनि चाह्यो भने राजा बनाउँछ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका.....
चर्चित ‘बजरंगी भाईजन’कि मुन्नी यति ठुली भईन, हेरौ तस्बिर ..।
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ००:५९
मुन्नी यानिकी हर्षाली मल्होत्रा प्रायले उनलाई मुन्नी भनेर नै चिन्ने गर्छन् । हर्षालीले सन् २०१५ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘बजरंगी भाइजान’बाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । उनी, ८ हजार बच्चाको बिचबाट यो चलचित्रका लागि छानिएकी थिइन् । त्यतिबेला उनी मात्र ७ बर्षकी थिइन् । हिन्दी चलचित्र क्षेत्रकी प्रसिद्ध बालकलाकार.....
२८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ००:३९
कहिलेकाँही हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ कि हामी जीवनमा आफ्नो लागि एकदमै खुसी हुन्छौं । खुसीको बेला हामीले धेरै कुरा भुलिरहेका हुन्छौं, जसले जीवनमा दिर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै जीवनपयोगी सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएका छन् । यहाँ भने जवान महिलाले ज’वानीमा कहिल्यै भुल्न नहुने कुराहरुबारे.....
छोरी भगाउन आएका प्रमीले आमासहितलाई भगाएपछि…
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १४:५३
भारतको झारखण्ड राज्यमा एउटा रोचक घटना घटेको छ। विहारबाट कारसहित एक प्रेमी आफ्नो प्रेमिका भगाउनका लागि झारखण्डको राँचीस्थित गोटिया गाउँमा पुग्छन्। नाम नखुलेका ती प्रेमिकाले नबालिग प्रेमिकालाई कारमा राखेर भगाउँदै गर्दा उनको आमाले देख्छिन्। आमाले त्यसको विरोध गर्दै छोरीलाई कारबाट उतार्न आग्रह गर्छन्।.....
श्रीमान श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नुहोस यस्ता गल्ति,जन्मन सक्छ यस्तो बच्चा
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १३:४४
यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन, भनिन्छ म’नुष्य भित्र २ प्रकारका मानिस हुन्छन, पु’रुष र महिला, तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन । जसलाई हामी ट्रां’सजेंडर अ’र्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं । वास्तवमा, ट्रां’सजेंडरलाई पु’रुष र महिलाहरुको कैटेगरीमा समावेश गर्न सकिदैन,.....